अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Cn Chautari
युक्रेनको रक्षा । मन्त्रालयले उमेरको परवाह नगरी सेनामा भर्ति हुन आह्वान गरेको छ त्यहाँको रक्षा बलले ट्वीट गर्दै आफ्ना सबै नागरिकलाई सेनामा सामेल हुन आह्वान गरेको हो । सेनाका कमा’ण्डर युरी गालुस्किनले जारी गरेको ट्वीटमा नाबालिगहरूलाई सेनामा सामेल गरिने उल्लेख गरिएको छ । आज, युक्रेनलाई सबै कुरा चाहिन्छ, सामेल हुने सबै प्रक्रियाहरू सरलीकृत छन्ट्वी टमा भनिएको छ तपाईंको राहदानी र पहिचान नम्बर मात्र ल्याउनुहोस्, कुनै उमेर प्रतिब’न्धहरू छैनन् । युक्रेनी सरकारले १६ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका मानिसलाई देश छाड्न प्रतिब’न्ध लगाएको छ । राष्ट्रपति जेलेनेस्कीले देशका लागि हरेक नागरिकले लड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला *****
एकदिन म’र्नु छदैछ, । कदापी हाम्रो दुश्मनलाई मेरा जनता र देश सुम्पिने छैन ! राष्ट्रबादी नेतालाई सलामउनले आफ्ना सम्बोधन र भिडिओ सेल्फीहरूका माध्यमबाट रुसी अतिक्रमणविरुद्ध विद्यमान युक्रेनी आक्रोशलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन झन्‌झन् अपत्यारिला बन्दै आएका छन् र उनले युक्रेनबाट भिन्न भएका डोनेट्स्क र लुहान्स्क गणतन्त्रमा युक्रेनले ‘नरसंहार’ मच्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले युक्रेनलाई ‘नाजीकरण’ बाट मुक्त गर्नु । पर्ने बताइरहँदा रुसी भाषा बोल्ने यहुदी परिवारका जेलेन्स्की शालीन, दृढ र प्रखर देखिएका छन्।यी अभिमतहरूले बुद्धिजीवीसहित धेरै आलोचकहरूले नदेखेका एउटा पक्ष बाहिर ल्याएको छ। मत सर्वेक्षणहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेका जेलेन्स्की रुसले अतिक्रमण थाल्नु । केही घण्टाअघि मात्रै राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रूपमा रूपान्तरित भइसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा राखिएको
११ वर्षीय युक्रेनी बालक । एक्लै १ हजार किलोमिटर हिंडेर छिमेकी देशमा पुगे ! विश्वभरबाट पाए नायकको सम्मानयुक्रेनमा रुसी यु-द्धमाझ एक ११ वर्षीय युक्रेनी बालक एक्लै १ हजार किलोमिटर यात्रा गरेर छिमेकी स्लोभाकिया पुगेका छन् । आमाको नोट र आफ्नो हातमा टेलिफोन नम्बर लेखेर ती बालक एक्लै त्यति लामो दूरी पार गरेका हुन् ।आफूसँगै उनले एउटा झोला पनि बोकेका थिए । ती बालक दक्षिणपूर्वी युक्रेनको जापोरिज्जिया क्षेत्रका बासिन्दा भएको बताइएको छ । सो क्षेत्रमा रहेको एउटा आणविक केन्द्रलाई रुसी फौजले गत साता नि-यन्त्रणमा लिएको थियो । समाचार विवरणअनुसार विरामी आफन्तको हेरचाह गर्न उनका अभि-भावक युक्रेनमै बस्नु परेको थियो । आफ्नो अविस्मरणीय यात्रा पूरा । गरेको भन्दै उनलाई स्लोभाकियाली गृहमन्त्रालयले ‘पछिल्लो रातकोसबैभन्दा ठूलो नायक’ भनेको छ । विवरणअनुसार बाल ककी आमाले एउटा रेल चढाएर स्लो-भाकिया पठाएकी थि
नेपाली युवा । प्रताप बस्‍नेत रुसविरुद्ध लड्न युक्रेनी सेनामा भर्ति: युक्रेनी राष्ट्रपतिबाट पाए ठूलो सम्माननेपाली युवा प्रताप बस्नेत पनि रुसविरुद्ध युक्रेनका तर्फबाट यु’ ‘द्ध ल’ड्न’ गएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो घर नेपाल भएको र नाम प्रताप बस्नेत भएको खुलाएका छन् । रुसले आ क्र म ण ग’रेप’छि युक्रेनमा रहेका धेरै नेपाली राजधानी किभबाट भा गे र छिमेकी देश पोल्याण्ड, बेलारुस, जर्मनी लगायतका देश पुगेका छन् । तर किभमै रहेका नेपाली युवा बस्नेत भने युक्रेनका लागि रुसविरु’द्ध यु’ ‘द्ध ल’ड्न’ सेनामा भर्ती भएका हुन् । युक्रेनलाई यतिबेला ठूलो सहयोगको खाँचो रहेको भन्दै उनले मानवीयताका लागि आफू यु’ ‘द्धमा हो’मि एको पनि बताएका छन् । साथै उनले आफू यु द्ध ल ड्न सेनामा भर्ती हुन लाग्दा ‘डर नभई गौरव लागेको समेत बताएका छन् ।
काठमाडौं, फागुन १६। संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा नेपाललाई सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला ***** । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आज बिहान एक विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा फराकिलो रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा रहेर दीर्घकालीन समृद्धिका लागि । सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको हो।उसले ५० करोड डलर अनुदानको एमसीसी कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अघि बढ्नसक्नेस्थिति सिर्जना भएकोसमेत बताएको छ।संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी, विद्युतको भरपर्दो आपूर्ति र सुलभ यातायात हुने । विश्वास रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धको ७५ वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै नेपालको व
एक महिलाले आफ्ना । श्रीमानलाई डि’भो’र्स दिएर आफ्नै सौतेनी छोरासँग विवाह गरेकी छन् । यो घटना रुसको मस्कोको हो । महिला रुसी ब्लगर हुन् । उनको नाम मरीना बलमशेबा रहेको छ ।उनले गत वर्ष श्रीमानसँग स’म्बन्ध बि’च्छेद गरेर आफ्ना सौतेनी छोरा भ्लादिमिर शेवरनसँग विवाह गरेकी हुन् । उनी अब आमा बन्ने भएकी छिन् । तौल घटाउने विषयमा धेरैलाई प्रोत्साहन गर्ने यी महिला अहिले आफ्नो निजी ह-र्कतका कारण चर्चाको पात्र बनेकी छिन् ।३५ वर्षीया बाल्मासेभा गत वर्षदेखि २१ वर्षका सौतेनी छोरा भ्लादिमिर ‘भोभा’ सेभिरिनसँग प्रेम स’म्ब’न्धमा रहेको बताइन्छ । विश्वविद्यालयको छुट्टीमा घर आएका बेला यी दुईबीच प्रेम स’म्ब’न्ध सुरु भएको हो ।आफ्नो छोरामाथि पूर्व श्रीमतीले आँखा लगाएको र भड्काएको बाबु सेभिरिनले बताए । ‘मेरो छोरालाई उनले भड्काइन् । म घरमै भएका बेला पनि रास-लिला गर्न उनीहरुलाई लाज भएन । यदी, मेरो छोराबाहेक अन्
आहा यस्तो छ बर्माको नेपाली गाउँ,। यति राम्रा छन नेपाली युवतीहरु, myanmar in nepali भिडियो तल हेर्नुहोस ! यो समचार पनि पढ्नुहोस् २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द कोभिड १९ संक्रमण रोकथामका लागि बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ९सीसीएमसी० ले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारदेखिनै लागू हुने गरी शैक्षिक संस्थाबारे यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने मेला महोत्सव बन्द रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने । सीसीएमसीले निर्णय गरेको छ । माघ ३ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरु पार्क, फिल्म हल, रेष्टुरेन्ट र सपिङको लागि मलमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनुपर्ने भएको छ । सीमानाकामा कोभिड परीक्षणलाई व्यापक तुल्याउने, खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई खो
यो मितीमा MCC पासको सहमतिको लागि नरेन्द्र मोदि नेपाल आउदै ।
काठमाडौ । नेपाल आर्थिक रुपमा दुई शक्ति छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनभन्दा कमजोर छ । यसैबीचमा दुई शक्तिराष्ट्रहरुको टकरावले नेपालले ठूलै आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिएको छ । अमेरिका र चीनको टकरावले नेपालको राजनीति मात्र प्रभावित छैन अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ । चीनले नेपालमा ‘द बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) सञ्चालनमा । ल्याइसकेको छ ।उसले विभिन्न देशमा बीआरआई परियोजना बढाइसकेको छ । यसलाई चीनले विकाससम्बन्धी परियोजना भन्ने गरेपनि यसमा उसको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । अमेरि काले एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्दैछ । एमसीसी सम्झौता भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संसदबाट पारित नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी रोक्न चीन लागेको देखिदैछ । अमेरिका भने एमसीसी कुनै हालतमा पारित गराउन सक्रिय छ । एमसीसी रोक्ने र बढाउने खेलले सत्ता राजनीतिमा समेत असर परेको खुलिसकेको छ । पछिल